पार्टीको नाम, सूर्य चिह्‍न ओली गुटले पाउँदैन : योगेश भट्टराई «
पार्टीको नाम, सूर्य चिह्‍न ओली गुटले पाउँदैन : योगेश भट्टराई
प्रकाशित मिति :4January, 2021 3:57 pm
विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले सूर्य चिह्‍न आफ्नो पक्षले पाउने दाबी गरेका छन् । उनले चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीको नाम र चिह्‍न ओली गुटले नपाउने जिकिर गरे ।
“पार्टीको नाम, सूर्य चिह्‍न केपी ओली गुटले पाउँदैन हाम्रो हो । यो प्रस्ट छ,’’ उनले भने । भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गरे । ओलीले आइतबार अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई श्रद्धाञ्जली दिने अभिव्क्ति दिएका थिए । सोही विषयप्रति भट्टराईले भने, “के भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओली ।
उहाँ होसमा त हुनुनुहुन्छ ? उहाँ सन्तुलनमा त हुनुहुन्छ ? हाम्रो संविधानले लेखेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिसको मा’नसिक सन्तुलन गुमाउँछ त्यसपछि पदमुक्त हुन्छ ।”उनले ओलीले हिजो दिएको अभिव्यक्तिले ओली पदमा बस्न सुहाउँछ भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए ।
“अति भयो । जे शब्द प्रयोग गरिहरनुभएको छ । प्रधानमन्त्री त देशको हेडसर नै हो । आज हेडसरले के पढाउँदै छ । मुलुकलाई के पढाउँदै छ त प्रधानमन्त्रीले ? अशिष्ठता, गालीगलौज, अमानवीयता, निष्कृष्टता कस्तो समाज बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?’’ भट्टराईको प्रश्न थियो ।